Iwo akanyanya kutyisa mabhuku, yechipiri chikamu chemabasa akasviba | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Zvinotyisa
Quote naRay Bradbury.
Mune zvakapfuura zvinyorwa zvaive zvakaganhurirwa kuti zvakaomarara sei (kana kurerekera) kuita runyorwa rune "akanakisa mabhuku anotyisa" mune peji rimwe chete. Chikonzero chacho chiri nyore: kureba kwakadaro kwetsamba hakuna kukwana kutsanangura vese vanyori vakakurumbira veiyi subgenre. Iyo mhando yerondedzero yenhema yakavhurwa neBritish Mary Shelley na Frankenstein kana iye ano Prometheus (1818).
Ipapo inotonhorera Edgar Allan Poe akaunza nzira nyowani dzekutyisidzira vaverengi nevanyori vakaita saBram Stoker kana HP Lovecraft vakakurudzira "iyo nhaka." Nechekare muhafu yepiri yezana ramakore rechimakumi maviri, tenzi mapeni aAnn Rice naStephen King vakaonekwa. Pamusoro pezvo, muzana ramakore rimwe chetero zvakakosha kutaura nezvaShirley Jackson, Ray Bradbury, John Fowles, naWilliam P. Blatty, pakati pevamwe. Heino runyorwa rweakakurudzirwa mabasa mune anotyisa mhando.
1 Kufona kwaCthulhu (1928), naHP Lovecraft
1.1 Chirongwa uye zvinyorwa
2 Kutuka kweHill House (1959), naShirley Jackson
2.2 Zvinyorwa uye vanonyanya kutaurwa
3 Iyo Yakanaka muRima (1962), naRay Bradbury
3.1 Chirongwa uye zvinyorwa
4 Muunganidzi (1963), naJohn Fowles
4.1 Chirevo uye kukanganisa pane pop tsika
5 Exorcist (1971), naWilliam Peter Blatty
Kufona kwaCthulhu (1928), naHP Lovecraft
Iri zita rinomiririra kuratidzika kwekutanga kwemunhu mukuru wengano weanonzi "mabhuku echinyorwa eCthulhu Mythos". Iyo inyaya yakagadzirirwa mumhando ye novelette uye yakarongeka mune mbiri-chikamu kurondedzera naLovecraft. Chikamu chekutanga chinotanga nekufa kwemupurofesa ane mukurumbira paBrown University muProvidence uye zvinoenderana nekurwiswa kwesekete rakatendeka kuCthulhu.
Iyi nhamba inofungidzirwa kuti ndeyekunze kwepasi uyo anga achirara zvakanaka kubva kusati kwaonekwa kwe Homo sappiens mukati meR'lyeh (guta rakanyudzwa). Zvino, muchikamu chechipiri, gogo yemutungamiriri akawana guta remadzitateguru pasi pePacific Ocean rinoburitswa. Sezviri pachena, iyo nguva yekumutswa kweCthulhu nevana vake yasvika.
Kutukwa kweGomo reGomo (1959), naShirley Jackson
Iyo inozivikanwawo se Imba inoshamiswa, iri zita rakamisikidza muenzaniso usingadzivisike munyaya dzechipoko. Naizvozvo, Kubudirira kwemunyori weAmerica S. Jackson nebhuku rino kunoenda kupfuura kudarika kwaro kutengesa kwakanaka. Chete padanho rekuteerera, Iyo Hauting yeChikomo Imba (muChirungu) yakafuridzira mafirimu maviri eHollywood uye akateedzana ane zita rimwe chete pachiratidziro chidiki
Saizvozvo, Stephen King anonongedzera kunoverengeka iyi seimwe yezvakanakisa zvidimbu zvezana ramakore rechiXNUMX. (Zvakare nekuve kurudziro yeiyo Salem's Lot Chakavanzika). Uyezve, Sophie Anoshaya akayera aya mavara mukoramu yake ye The Guardian (2010) se "iyo inotsanangudza nyaya yezvekugara dzimba."
Zvinyorwa uye vanonyanya kutaurwa
Munzvimbo isina kutaurwa muUnited States, imba yacho inowanikwa Chikomo cheGomo, Yakavakwa naHugh Crain mushakabvu. Ichi chivakwa chinotarisa chakatorerwa nhaka naLuke Sanderson, mumwe wevane protagonists. Pamwe chete naye, vatambi vataurwa pazasi vanosangana munzvimbo iyoyo (mumwe nemumwe wavo akapiwa hudzamu hunoshamisa hwepfungwa):
- Dr. John Montague, nyanzvi yekuongorora zviitiko zvakaenzana.
- Eleanor Vance, musikana anonyara anotsamwa nekunzwa kwekuve nehupenyu husina rusununguko, akasungwa naamai vakaremara uye vakaomarara.
- Theodora, muimbi ane eccentric uye asina hanya hunhu.
Kutuka kwechikomo ...
Rima rakanaka (1962), naRay Bradbury
Pakutanga yakanzi Chirungu Chinhu Chakaipa Nenzira Iyi Chinouya (Chinhu chakashata chave kuda kuitika), chidimbu chakanakisa chekufungidzira uye chinotyisa. Vapikisheni vayo ndiJim naWilliam, vese vane makore gumi nematatu ekuberekwa, vanogara hupenyu hunokatyamadza nerunyararo rwusinganzwisisike muMidwest. Nzvimbo iyoyo inotungamirwa neyakavanzika VaRima, vane ganda rinoratidza tattoo nemumwe wevashandi vake.
Vashandi vekuratidzira vanhu avo vakapedzisira vanyengerwa naVaRima nekuda kwekupihwa kwekufungidzira kwakarambidzwa. Chimwe chezvinhu zvisingarambidzike zvinopihwa iko kurota kwehupenyu husingaperi. Takatarisana nemusungo wakadai wekushungurudza, iwo wega mukana wekuponeswa kune vanopokana unoratidzika kunge kuseka uye rudo. Iri rima uye rakasarudzika basa rehunyanzvi rakawanikwa ne Bradbury.
Rima rakanaka ...
Muunganidzi (1963), naJohn Fowles
Chirevo uye kukanganisa pane pop tsika
Iri bhuku nemunyori weChirungu John Fowles rakakanganisa zvikuru Anglo-Saxon pop tsika. Muna 1965, nyaya yake yakaunzwa kuchikona hombe pasi pekutungamirwa naW. Wyler. Saizvozvo, Kubva pamakumi manomwe kusvika pari zvino zvave zvichitaurwa nezvidimbu nezvikwata zvakawanda zvemimhanzi muEurope neUnited States. Pakati pavo, The Jam, Slipknot, The Smiths, Duran Duran, Steve Wilson uye The Raves.
Kunyangwe iye "tenzi wekutyisa", Stephen King, anotumidza mazita kuti Muunganidzi mune angangoita maviri emanonyorwa ake (Mysery uye Iyo Rima Shongwe). Nechekare mumireniyumu itsva, iri bhuku rakafemera zvimwe zvikamu uye vatambi ve Criminal Minds and of The Simpsons, maviri akakurumbira kwazvo nhepfenyuro dzeterevhizheni pasi rese.
Frederick Clegg, mushandi wehurumende uye amateur butterfly muunganidzi, anozadzwa naMiranda Grey, mudzidzi ane hunyanzvi uyo waanoyemura muchivande. Rimwe zuva, anokunda bheji rakakura renhabvu, anosiya basa rake, uye anotenga imba yenyika. Asi, anonzwa ari ega mumba uye afunga kupamba Miranda kuti amuwedzere iye kuunganidzwa wake wakanaka wakanaka husina zvipembenene.
Iye Exorcist (1971), naWilliam Peter Blatty
Musimboti weruzivo urwu wakafemerwa nehupombwe hwakanzwiwa naWilliam P. Blatty paakanga achidzidza paGeorgetown University.. Ichi chiitiko chingadai chakaitika munzvimbo mbiri dzeAmerica, Mount Rainer (Maryland) neBel-Nor (Missouri) pakati pemwedzi waMarch naApril 1949. Chiitiko chinoshamisa chakaziviswa zvakanyanya nedhamhu remuno.
Mufundisi Lankester Merrin anowana chimiro cheSumerian imp Pazuzu yakakwenenzverwa nemenduru yaChristopher pakati pekuchera matongo muIraq. In consecuense, anodudzira kuti kusangana pakati pezvakanaka nezvakaipa kuri kuuya, nyaya maari ane ruzivo nehupombwe hwake muAfrica yese.
Iko kusimbiswa kunosimbiswa apo musikana achiri kuyaruka anonzi Regan McNeil - mwanasikana wemukurumbira mutambi - anoratidza kamwe kamwe zviratidzo zvehosha isingazivikanwe. Saizvozvo, chakanyanya kuvhiringidza amai vake chinoshanduka kuva shanduko dzinotyisa dzepanyama uye zviitiko zvemweya zvinotambudzwa nemusikana. Nekudaro, mukadzi akapererwa anosarudza kukumbira rubatsiro kuna Baba Damien Karras.
Pakutanga, Karras anozeza kutora chikamu nekuti achangobva kufirwa naamai vake uye ave nedambudziko rechitendero. Mushure mezvo, anobvuma kugadzirisa nyaya iyi, kunyangwe aine kukahadzika kukuru. Zvisinei, Uchapupu hwekubatwa nemadhimoni hwakawanda uye Karras anotsvaga rubatsiro rwaFather Merrin.. Saka ndipo panotanga kunetesa mweya unozoisa kutenda uye kuda kwevose varipo pamuedzo.
Iye Exorcist: 40th ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » Mabhuku akanyanya kutyisa (chikamu chechipiri)